”Maxay DF Somaliya wax uga qaban la’dahay maleeshiyada Al-Shabaab ee ku xoogeysatay Sh/dhexe‘‘! waxa yiri.. | HalQaran.com
”Maxay DF Somaliya wax uga qaban la’dahay maleeshiyada Al-Shabaab ee ku xoogeysatay Sh/dhexe‘‘! waxa yiri..
Muqdisho (Halqaran.com) – La taliyaha qaybta Warbaahinta ee Madaxweynaha Hirshabelle, Xasan Cabdiqaadir Muudey, ayaa si adag uga hadlay maleeshiyaadka Ururka Al Shabaab ee ku soo xoogeysanaya Gobolka Shabellaha Dhexe.
“Ciidanka Xoogga Dalka oo fulinaya amarka Madaxda Qaranka waxay hawlgalo saf ballaaran ka bilaabeen qaybo ka mid ah Gobolka Shabellaha Hoose, inkastoo ay ku guuleysteen inay Shabaab ka saaraan qaybahaasi, hadana Shabaabkii laga soo saaray Gobolka Shabellaha Hoose waxay u soo wareegeen Gobolka Shabellaha Dhexe, waxayna ka wadaan dhibaato baahsan.” Ayuu yiri Xasan C/qaadir Muudey oo la hadlay Warbaahinta gudaha.
Waxaa uu sheegay in Al-Shabaab ay qaraxyo iyo weeraro jid-gal ahba ay ka wadaan Gobolka Shabellaha Dhexe, isagoo intaa ku daray inay beegsanayaan Madaxda Hirshabelle, Saraakiisha Ciidamada iyo weliba dadka rayidka ah.
Si kastaba, hadalka ka soo yeeray Muudey ayaa ku soo aadaya, xilli maalintii Jimcaha duleedka Magaalada Jowhar lagu dilay afar ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Hirshabelle, oo uu ku jiro Kuxigeenkii Taliyaha Ilaalada ee Madaxweyne Waare, oo lagu magacaabi jiray Cabdi Xasan Dhiilow. Weerarkaasi waxaa si dirqi ah kaga badbaaday Taliyaha Booliska Hirshabelle, Xasan Dhicisow.
Shabaabka ku xoogeysaday
Xasan Cabdiqaadir Muuday